မသက်ဇင်: နိုင်ငံတကာ အခြေအနေ ( ရုရှား )
နိုင်ငံတကာ အခြေအနေ ( ရုရှား )
၁၉၁၇ ခုနှစ် မဟာအောက်တိုဘာ ဆိုရှယ်လစ် တော်လှန်ရေးကြီး အောင်ပွဲခံပြီးခဲ့သည့် အချိန်မှ စပြီး အုတ် မြစ် ချ တည်ဆောက်လာခဲ့ သည့် ဆိုဗီယက်ယူနီယံ သည် ၇၅ နှစ်နီးပါးမျှ စစ်ရေး နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး အင်အား ကြီး မားလှသော ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံကြီး တနိုင်ငံအဖြစ် ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်နယ်ချဲ့ စနစ် နှင့် ကိုလိုနီ စ နစ်ဆန့်ကျင် သော ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံငယ်လေးများ ၏ အားကိုး အားထားပြုရာ လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အာရှတိုက် မှ ကိုး ရီးယား ၊ ဗီယက်နမ် ၊ လော ၊ ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ များ အာဖရိက မှ ကွန်ဂို ၊ အင်ဂိုလာ ၊ မိုဇမ်းဘစ် ၊ တန်ဇန်နီးယား ၊ ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံများ အာရပ်ကမ္ဘာ မှ အီဂျစ် ၊ ဆီးရီးယား ၊ အီရတ် ၊ ယီမင် ၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယား နှင့် အာရာဖတ် ၏ ပီအယ်အိုအဖွဲ့များ လက်တင်အမေရိကား မှ ကျူးဘား ၊ ချီလီ ၊ ဂရင်နာဒါ နိုင်ငံများနှင့် အရှေ့ ဥရောပ နိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များသည် မော်စကိုမြို့တော် သို့ ဝင်ထွက်သွားလာ ကာ ငွေကြေး လက်နက် အကူအညီများ တောင်း ခံရယူခဲ့ ကြသည်။
ဆိုရှယ်လစ် စီးပွားရေး မူဝါဒ အရ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှန်သမျှ ကို လုံးဝခွင့်မပြုပဲ ကုန်ထုတ် စွမ်း အားစု များ နှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အားလုံး ကို နိုင်ငံပိုင်အဖြစ်သိမ်းယူကာ ဗဟိုမှ ချုပ်ကိုင်သည့် စီးပွားရေးစနစ် ကို ကျင့် သုံးလာခဲ့ ရာ တပါတီ စနစ်၏ ကြီးမားလှသော ချို့ယွင်းမှုများနှင့် ညံ့ဖျင်းလှသည့် စီမံ ခန့်ခွဲမှု များကြောင့် ပြည် သူပိုင် စက်ရုံ အလုပ်ရုံများနှင့် နိုင်ငံပိုင် သိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးရေး ဌာန အားလုံးတို့ မှာ ဖရိုဖရဲဖြစ်ကာ တ ဖြည်း ဖြည်း လုံးပါးပါး သွားခဲ့ရသည်။
စီးပွားရေး ချွတ်ခြုံ ကျ မှု ကို ပြန်လည် အဖတ် ဆယ် နိုင် ရန် အတွက် ဗဟို မှ ချုပ်ကိုင်သည့် စီးပွားရေးစနစ် ကို ပုဂ္ဂလိ က စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်ခွင့်များ အပါအဝင် ဈေးကွက် စီးပွားရေးစနစ်သို့ ပြောင်းလဲ ရန် ဂေါ်ဘာချောဗ့် ၏ ပယ် ရယ်စ် ထရွိုက်ကာ ခေါ် ပြန်လည်ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး မူဝါဒ နှင့် ပွင့်လင်း လွတ်လပ် ရန် ပြောဆို နိုင်ရန် အ တွက် ( ဂလပ်စနော့ဝါဒ ) ကို ကျင့်သုံး ရန် လှုံ့ဆော် လှုပ်ရှားမှု အပေါ် စနစ်ဟောင်း ကို အရိုးစွဲနေသူ ကွန် မြူနစ် ပါတီ အတွင်း မှ အယူသီးဝါဒ သမား များ ရုရှားပြည်သူလူထု တွင်း မှ ရှေးဟောင်း အယူ အဆ ပြင်း ထန် သူ များ ၏ ခုခံ ဆန့် ကျင်မှု များ ကြောင့်ဂေါ်ဘာချော့ဗ် ၏ ပြန်လည်ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်း စဉ်များ က စင့်ကလျားဖြစ် ကာ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်း များ အကြီးအကျယ် ဖြစ်ပွားလာပြီး နောက်ဆုံး ၁၉၉၁ ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင် သ မ တ ဂေါ်ဘာချော့ဗ် အား ဖြုတ်ချ ၍ အာဏာသိမ်းရန် ကျြိုပမ်းမှုကြီး ပေါ် ပေါက် လာသည် အထိ ဖြစ်ခဲ့သည် ဂေါ်ဘာချော့ဗ် ကိုယ်တိုင်လည်း နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်အဖြစ်မှနုတ်ထွက်ပေးခဲ့ရသည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ် သြ ဂုတ်လ ၁၉ ရက် နေ့ က ဂေါ်ဘာချော့ဗ် ထံမှ အာဏာ သိမ်း ရန် မော်စကိုမြို့ တွင်း သို့ အ လုံး အ ရင်း ဖြင့် ဝင်ရောက် လာကြ သည့် ကေဂျီဘီ အထူး တပ်ဖွဲ့ များ နှင့် သံချပ်ကာ ကား တပ် များ အား လုံး ကို မော်စကို မြို့ တွင်း မှ ပြန်လည် ဆုတ်ခွာ သွားကြ ရန် ဘောရစ္စယဲ့ဆင်သည် သံချပ်ကာ ကားတစီးပေါ် သို့တက် ၍ ရဲရဲ တောက် မိန့်ခွန်း ပြော ကြား ကာ ပြတ်ပြတ်သားသား အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
ဘောရစ္စယဲ့ဆင်သည် ရုရှားသမတ နိုင်ငံ ၏ ပထမဆုံး သော ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် လူထု ၏ အ ကြီး အ ကျယ် ထောက်ခံမှု ရရှိ ကာ ရုရှားသမတ နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော သမတ ဖြစ်လာ ခဲ့သည်။
ပြိုကွဲ ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည့် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီး ကို ပြန်လည် စုစည်း တည်ဆောက် ရန် အတွက် ယဲ့ဆင်သည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်-ဇန်နဝါရီလ ပထမပတ် အတွင်း မှာပင် ဘိုင်လိုရုရှားသမတ နိုင်ငံ မင့်စ်ခ်မြို့တော် တွင် ယခင်ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုကြီး တွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသည့် သမတ နိုင်ငံ ၁၁ နိုင်ငံမှ သမတများ နှင့် ဝန်ကြီးချုပ် များ ကို ခေါ်ယူ တွေ့ဆုံ ၍ အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးကာ ( လွတ်လပ်သော ဓနသဟာယ နိုင်ငံ များ အဖွဲ့ ) ကို ဖွဲ့ စည်းတည်ထောင်လိုက်သည်။
ကမ္ဘာကြီး ၏ ခြောက်ပုံ တစ်ပုံ မျှ ကျယ်ဝန်းကြီးမား ၍ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ဆယ်ပုံတစ်ပုံမျှ နေ ထိုင် လျက်ရှိကြ သော ဆိုဗီယက်ယူနီယံ နိုင်ငံကြီးပြိုကွဲပြီးသည့် တိုင် မဟာဗျူဟာ ညူကလီးယား လက်နက်ကြီး များ အင် အားကြီး မား လှသည့် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များ အံ့မခန်းတိုးတက်လျက်ရှိသည့် သိပံပညာရပ်များ စစ်အေးတိုက်ပွဲကို အ ကြောင်းပြု၍ နှစ်စဉ်တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းလာခဲ့ကြသည့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ တပ်သားဦးရေ သုံးသန်း ခုနှစ်သိန်း တိုက်လေယာဉ် အစင်းပေါင်း တစ်သောင်း သံချပ်ကာကား ငါးသောင်းခြောက်ထောင် မြေပြင်နှင့် လေယာဉ်ပစ် အမြောက် လက်နက် ကိုးသောင်း စစ်သဘော အစင်းရေ ရှစ်ရာတိတိ ရှိနေခဲ့သည်။
အရေအတွက် များပြား သည့် စစ်ဝန်ဆောင်စားရိတ်များ အား ဓန သဟာယ အဖွဲ့ က စုပေါင်း ၍ ဗဟိုချုပ်ကိုင် မှုဖြင့် တာဝန်ယူသွား ရန်သမတ ယဲ့ ဆင်က အကြံပြု တင်ပြခဲ့သော်လည်း ယူကရိန်း ၊ မော်လဒေးဗီယား နှင့် အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံတို့က မိမိတို့ နိုင်ငံများအတွက် ကိုယ်ပိုင်သီးခြား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရန် စီစဉ်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း ယဲ့ဆင်၏ အကြံပြုချက်အား ကန့်ကွက် ပယ်ချခဲ့သည်။
နောက်ဆုံး ယဲ့ဆင် သည် ဓနသဟာယ နိုင်ငံများ အားလုံး ကျေနပ်စေရန် အတွက် မိမိတို့ နိုင်ငံမှ ပြဌာန်း ထား သည့် တရားဥပဒေ အရ မိမိတို့တစ်နိုင်ငံခြင်း တပ်မတော် များထူထောင်နိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း အသိ အမှတ်ပြုခဲ့ ရ သည်။ ကျန် ဓနသဟာယ အဖွဲ့ဝင် ရှစ်နိုင်ငံတို့သည် ရုရှားနိုင်ငံ၏ ကွပ်ကဲမှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဓနသဟာယ စစ်ဦးစီးမှု တခုတည်း ၏ အမိန့် ကိုနာခံရန် သဘောတူခဲ့ ကြသည်။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတနိုင်ငံ ကို တည်ထောင်နေရသည့် ယဲ့ဆင်သည် ပြည်တွင်း အတိုက်အခံများ၏ အုံကြွ ဆန့်ကျင် မှု ကို အလူး အလဲ ခံခဲ့ရသည်။ ယဲ့ဆင်သည် စစ်တပ် မှ အာဏာသိမ်းပွဲ ကို ဖြိုခွင်းခဲ့ပြီး နောက် ကွန်မြူနစ် ပါတီ အားလုံး ကို ဖျက်သိမ်းပစ်ခဲ့ပြီး ပါတီ အဆောက်အအုံ နှင့် ရန်ပုံငွေများ ကို ပြည်သူပိုင် အဖြစ် သိမ်းခဲ့သည်။ ယဲ့ဆင် သည် ပူတင် အား မော်စကို သို့ ခေါ်ပြီး တာဝန်အဆင့်ဆင့်ပေးကာ နောက်ဆုံး သူ့ရာထူး ဆက်ခံရန် တင် မြှောက် လိုက်သည်။
သမတပူတင်သည် ရုရှားပြည်သူလူထု ၏ ထောက်ခံ မှု ၇၀ ရာခိုနှုန်း ကျော်ရှိပြီး သမတ သက်တန်း၈ နှစ် အ တွင်း သူ ၏ လုပ်ဆောင်ခဲ့မှု များအား ၂၀၀၈ နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့ က ကရင်မလင် တွင် နောက်ဆုံး သ တင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်သွားခဲ့ပြီး ပူတင် စိတ်ကြိက် ရွေးချယ်ပေးခဲ့သည့် ယခု ရုရှား သမတ ဒီမီထရီ မက် ဒက် ဖ် သည် သမတ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် အပြတ်အသတ် အနိုင်ရသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by မသက်ဇင် at 4:15 PM
နိုင်ငံတကာ အခြေအနေ ရုရှားကို လာဖတ်ပါတယ်--
ဗဟုသုတတွေ ရရှိလို့ အစ်မ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်များ။
မသက်ဇင်က နိုင်ငံတကာ အခြေအနေတွေ တော်တော် လေ့လာထားတာပဲ။
တော်ရုံလူ ဒီလိုမျိုး မရေးနိုင်ဘူး။
နိုင်ငံတကာ အခြေအနေကို စိတ်မဝင်စားဘူး၊ မလေ့လာထားဘူး၊ အချိန်ပေး စာမဖတ်ထားဘူးဆို ဒီလို ရေးလို့မရဘူး။
4:51 PM PST
မမ ရေ..၀ါဝါ က နိုင်ငံရေးတွေ သိတ်မဖတ်ဖြစ်ဖူးလေ..
အခု မမ ရေးထားတာကို သေခြာဖတ်သွားတယ်နော်။
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ။း) ကျေးဇူး မမ ။
အစ်မ သက်ဇင်လာလည်သွားတယ်နော် နိုင်ငံရေးတွေ သိပ်မဖတ်ဖြစ်တော့ အခုအမသက်ဇင်ရေးမှာပဲ သေချာဖတ်ဖြစ်တော့တယ်အမရေ။ ဗဟုသုတလည်းရတယ် အမရေ အခုလိုဖြန့်ဝေပေးတဲ့အမ သက်ဇင်ကိုလည်း ကျေးဇူးပါပဲ အမရေ............
မမ မသက်ဇင်က တော်တော်လေ့လာထားတာပဲ
လေးစားပါတယ် မမ ရယ်...
အခုလို မျှဝေပေးလို့ လဲကျေးဇူးပါပဲ နော် မမ
သေသေချာချာလေး ဖတ်သွားပါတယ် အမရေ
နောက်တစ်ဆက်မှာ ပူတင်ပဲ သမ္မတ ပြန်ဖြစ်မယ်လို့ ပြောကြတယ် နိုင်ငံရေး လှည့်ကွက်တစ်ခုအနေနဲ့ အကွက် ရွေ့လိုက်တာ ထင်တယ်ဗျ တော်တော်လေး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ
ရေးထားတာ တွေ့ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမရေ........
အမပြောထားတဲ့ မော်လဒေးဗီယား ဆိုတာ
မော်လဒိုက် နိုင်ငံကိုပြောတာလား မသိဘူးနော်
ယခုလက်ရှိသမတ သည် ပူတင်၏၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပူတင်က သမတ တင်မြှောက်ကာ ယခု ပူတင် ကပင် ၀န်ကြီးချုပ်တာဝန် ဆက်ယူသည်ဟု သိရပါသည်..ဘယ်လိုကြီးပါလိမ့်မလဲလို့ တွေးမိပါသည်..။ ပူတင်သည် အာဏာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီး သမတ သက်တမ်းကုန်သွား၍ သူ့ငယ်နိုင်ကို သမတ တင်မြှောက်ပြီး အာဏာကို နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင် နေတုန်းဘဲဟူ၍ လည်း ပြောဆိုနေကြပြန်ပါသည်..။
ပူတင်ဒီမိုကရေစီနှင့်ရုရှ နိုင်ငံရေးသည် ယဲ့ဆင် တည်ဆောက်ခဲ့သည့်၊ ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့သည့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ဦးမတည်သည်မှာ အသေအချာဟု ပြောနေကြပါသည်..ဟုတ်လားဆရာမရေ...
(ဒီတပတ်ရုရှကို ဖတ်ရတာလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ)
12:59 AM PST
နိုင်ငံတကာဗဟုသုတတွေ မျှဝေပေးလို့ မသိတာလေးတွေ သိခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးနော် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းစွာနဲ့ စာပေဗဟုသုတမျှဝေနိုင်ပါစေ။
အများအပြားကို လေလာထားတာပဲ အစ်မက ။ ကျေးဇူးတင်
ပါတယ်ဗျာ အခုလို မျှဝေပေးတဲ့ အတွက်ပါ ။ နောင်လည်း
စာကောင်းပေမွန်များ ဆက်လက် ဖတ်ရှုချင်ပါတယ် ။
3:52 AM PST
ရှေးဆန်တယ်လို့ ယူဆရတယ် အစ်မရေ
တသသ ဖြစ်နေတုန်း လို့ ယူဆစရာများရှိသလားပဲ။
ရုစကီးတွေ အကြောင်းတစေ့တစောင်း ဖတ်ရတာ ကျေးဂျူးကဘာပါ အမ....ရေ!
မမရေ.. သေသေချာချာဖတ်မှတ်သွားပါတယ်.မမရေ.. ကျတော် က ရှရှားအကြောင်း ဒီထက်မက မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ပူတင်သမ္မတဖြစ်လာပုံ။ ဂေါဘာချော့ အကြောင်း၊ နောက် ဘောရစ်ယဲဆင်တို့ လုပ်ဆောင်ပုံ နောက် နူကိစ္စ ၊စစ်အေးတိုက်ပွဲ၊ စတာတွေကို ပေါ့။ ကျတော်တို့ ကသိပ်မသိတော့ မမတို့ရေး တာကို စောင့်မျှော်နေတာပါ။ မမအဆင်ပြေရင် ထပ်ရေးပေးစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ မမကို ဆရာလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျတော် သိချင်တာလေးတွေကို တောင်းဆိုတာပါမမ။
တီတီကတော်တော်လေး ဗဟုတုသ ပြည့်စုံတာပဲနော်..
နိုင်ငံတကာ အကြောင်းတွေကိုလည်း တော်တော်လေ့လာ
ထားတယ်.. အားကျတယ် တီတီဇင်ရေ... မက်မက်
မက်မက်ကလေ ရုရှားတွေရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ကိုတော့
တော်တော်လေးကို ချီးကျူးတယ်... အဲဒီမျိုးချစ်စိတ်
ရုရှားက လည်း တမျိုးတစ်ဘာသာ..ဘာဖြစ်ဖြစ် လေ့လာခွင့်ရတာကျေးဇူးပါ...
စိတ်ဝင်စား ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ ၊၊ မသက်ဇင် ခုလို အသေးစိတ်ရေးပြထားတာလေး ကိုကြိုက်တယ် ၊၊ကျေးဇူးပါဗျာ ၊၊
အောက်တိုဘာ တော်လှန်ရေးရဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ရုရှားတွေ အတွက် အရေးကြီး အဖြစ်အပျက် တစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ပါ။ သူ့တို့ ရင်ထဲအသဲထဲမှာ ဒီနေ့ အထိ မမေ့နိုင်သေးတဲ့ အဖြစ်ပါ။ အောင်ပွဲခံတဲ့နေ့မှာ မျက်ရည်တွေ ကိုယ်စီ ဝဲနေကြတာကို တွေ့လို့ မေးကြည့်တော့ ဒီအောင်ပွဲ အတွက် သူတို့ ပေးခဲ့ရတာ လူသန်းပေါင်းများစွာရဲ့ အသက်တွေပါတဲ့။ တကယ်ပဲ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ သေခဲ့တဲ့ အဓိက လူဦးရေက ရုရှားတွေပါ။ အရှေ့အနောက် ကမ္ဘာတစ်ခြမ်းလောက် ရှည်လျှားတဲ့ သူတို့ နိုင်ငံကြီး ဘယ်လို တည်ထောင်ခဲ့လဲဆိုတာ ကျနော်အရမ်း စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ရုရှားအကြောင်း ထပ်ပြီး ရေးပေးပါ့လား။ အခု ဝေမျှခဲ့တာတွေ အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါဗျာ။
အစ်မရေ တချိန်က အင်အားကြီးတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုမှာ အခရာလို့ ဆိုနိုင်လောက်တဲ့ ရုရှားအကြောင်းကို သေသေချာချာရေးသားထားတာ တော်တော့်ကို ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ်။ ရေးနိုင်လောက်အောင် လေ့လာအားကောင်းလွန်းတဲ့ အစ်မကို လေးစားအားကျမိပါတယ်။
အမရေ... ယဲ့လ်ဆင်က ပူတင်ကို သူနဲ့သူ့မိသားစု ရပိုင်ခွင့်တွေ တရားဝင်ဇွတ်တောင်းပြီး ရအောင်လုပ်လုပ်၊
ပြီးမှ အာဏာလွှဲတာ လေးပါ ထည့်ရေးပါလားအမရေ။ အဲဒါလဲ သမိုင်းပဲလေ။ ရုရှားနဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒဟာ ကြောက်စရာကောင်းအောင် တွဲနေတာလေး ပေါ်အောင်ရေးနိူင်တာ လေးကောင်းတယ်ဗျာ။
နောက်မှ ရောက်လာပြီး ကွန်မင်း မပေးဖြစ်တာ ခွင့်လွတ်ပါ။
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ရှရှား အကြောင်း တင်ပြတာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ တော်တော်ပြည့်စုံတယ် ဆိုရမှာပဲ၊ ဒါဗေမဲ့ ရှရှား နိုင်ငံရေးမှာ ဇာဘုရင်လည်း အရေးပါသလို လီနင် စတာလင် တို့လည်း အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှာ ရှိနေသေးတယ်။ အမ မရှိုထားနဲ့လေ စုံစုံလင်လင် မှတ်သားရအောင် ဆက်လက် အားထုတ်ပေးပါလား ခင်ဗျား။
နှစ်ကြိမ်မြောက်ကျမှပဲ ကွန်မန့်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ သူများတွေရဲ့ ကွန်မန့်လည်း ဖတ်ရအောင်ဆိုပြီး နောက်မှရေးတာပါ။ ဆောင်းပါးကောင်းလေးပါ။ ရုရှအကြောင်းပြောမယ် ဆိုရင်တော့ အတော်စိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့ အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လို့ အများကြီးနေမှာပါ။ သေချာလေ့လာပြီး ပြန်ဝေမျှတာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။
တကယ်တော့ ရုရှားတွေက တော်တော်လေး
အစ်မရေးတာတွေကတော့ အကုန်လုံးကို ဖတ်ပြီး သိမ်းထားနေရတယ် .. တစ်ကယ်ကောင်းတယ် အစ်မရေ ...
bloggerမှတ်ချက်တွေစုံလို. ဘာပြောရမလဲတောင် မသိတော့ဘူး
10:46 PM PST
စေတနာနဲ့ အားထုတ်မှုကို အရမ်းလေးစားပါတယ်ဗျာ...
သမီးကို မသက် ဘလော့ဂ်ပြပေးလိုက်တော့..
နေယ် တစ်ဆက်တည်းဘဲ မသက်ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို ကျနော့်ဆီမှာ လင့်ခ်ထားချင်ပါတယ်...ခွင့်ပြုပါ.
အလုပ်တွေအရမ်းများနေတယ်ဗျာ.. အခု HDP Flat ရဲ့ Precast တွေကို လက်စသတ်နေတာ.. အရမ်းပင်ပန်းတယ်.. စာလည်းမရေးဖြစ်သလို စာလည်းမဖတ်ဖြစ်ဘူး.. MRT ပေါ်မှာတော့အချိန်ရရင်ရသလိုတော့စာဖတ်ဖြစ်တယ်.. ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်က ရာဟုလာသံကစ္စည်းရေးတဲ့ ဗော်လဂါမှဂင်္ဂါ ဖတ်နေတယ်.. ရုရှနိုင်ငံအကြောင်းရေးထားတာတွေ့လို့အသိပေးမိတာပါ.. ကျွန်တော်ဝေဖန်ထားတာနည်းနည်းပြင်းထန်သလိုရှိတာကိုနားလည်ပေးပါ.. (နှင်းဆီ) ကို.. ပိုကောင်းစေလိုလို့ပါ..
ဗဟုသုတ အများကြီးရပါတယ်ခင်ဗျာ။ အမြဲဖတ်ရှုနေပါတယ်
ကျွန်တော်က နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကတော့ ရုရှားကိုရောက်နေပြီလေ ။ ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းကို သတင်းကနေ အမြဲကြည့်ရတယ်လေ ။ ပူတင် က စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူ့ဖသာသူ အရည်အချင်း ရှိလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ။ ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ ဒီမီထရီ မြေ့သဗျေကျိ ဟာ ထောက်ခံမဲ အများဆုံး ရခဲ့တာတော့ သေချာတယ်ဗျ ။
ဖတ်ရှုအားပေးလျက်ပါ သမိုင်းအကြောင်းကျနော်လည်းတော်တော်လေး ၀ါသနာထုံတယ်ဗျ ဒီထက်ပိုရေးနိုင်ပါစေဗျာ...............
ကျွန်တော် ရုရှားကို ရောက်နေတာ ၁ နှစ်ကျော်
ပြီဗျ။ အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရရင် အစ်မ သိထားတာထက် နည်းနည်းလေးပဲ ပိုသိတယ်။
အစ်မကိုတော့ ကျွန်တော် တကယ်ကိုပဲ ချီးကျူးပါတယ်ဗျာ....
သားသားကရုရှားကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ မသက်လောက်တောင်မသိဘူး.. အဟီး.. ခုမှရှင်းသွားတာ။ ကျေးဇူးရှလူးတင်ပါဒယ်..။